May 2011 | TechSectors
WFP is also part of the big team
Since I last wrote you, I visited parts of Japan that were hit by the tsunami.
I thought I’d see wrecked houses, but it was worse. I could only see foundation stones of houses which barely showed that there were once houses here. I’ve never seen anything like it before. One minute, as you’re driving, everything looks normal. Cherry blossoms are in full bloom. The next minute, the whole scene drastically changes.
Everything was washed away. If you look carefully, you’ll see household items scattered across the ground: toys, notebooks, spices, pots and pans,aradio, photo albums – each of themapiece of somebody’s life.
Everyone in my group was silent. We didn’t know what to say.
That was the shocking part. Then we went to the Evacuation Centre where WFP was distributing high-energy biscuits and buildingalarge tent that would be used asawarehouse to stock relief supplies. Here, I saw the remarkable strength and determination of the survivors. One man told me, “We will never give up. I promise you that this will beagreat town the next time you come. With your cooperation, we will persevere.”
To see for yourself, watch this video of Japanese model Kurara Chibana visiting the wreckage and find out how your contribution is makingadifference:
I saw with my own eyes that the aid we provided was effective. In gratitude to each and every supporter, the survivors repeatedly said “thank you”.
The people of Japan can feel that the world was there to help them. Donations came not only from developed countries but also developing countries – countries that Japan had helped in the past. It’s quite moving.
Lastly, I need to mention that the workers on the ground are absolute heroes. Many of them lost close family members and all their belongings, but they remain committed to helping other survivors and rebuilding their country.
Everyone is doing their part and working together. WFP is also part of the big team, supporting the local people and workers who are determined to support their fellows and rebuild their own country. It’satruly unique and impressive operation.
Thank you for helping to make it possible,
Ms. Yuko Yasuda
P.S. To watch the longer version of the video, click here.
တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အမြဲလိုလို ရောက်ဖြစ်နေတဲ့ အင်တာနက်ကမ္ဘာထဲမှာ အားလပ်ချိန်တိုင်း ဟိုဒီလည်ပတ်ရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချိန်တွေကုန်ဆုံး သွားတတ်ကြပေမယ့် ဒီ အင်တာနက်ကနေ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘာတွေများ ရယူနိုင်ခဲ့ကြပြီလဲ ??
အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသုံးချတဲ့ ပုံစံခြင်းတော့ တူကြလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး - တစ်ချို့က ဖျော်ဖြေရေးအတွက် - တစ်ချို့က ပညာရေးအတွက် - တစ်ချို့က စီးပွားရေး - လူမှုရေးတွေအတွက် စသဖြင့် .... ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သတ်လာခဲ့ကြပြီ ဆိုရင် ကောင်းတာ မကောင်းတာ နောက်ထား - လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ စိတ်ဝင်စားရာအလိုက် အကြိုက်ဆုံး web sites - အမြဲ ဝင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ web sites ဆိုတာမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ Facebook ပဲ ဆိုကြပါစို့ - Facebook နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခုနောက်ပိုင်း လူငယ်တော်တော်များများ Style တစ်ခုလို သုံးလာကြပြီ - ဂိမ်းတွေ ဆော့ကြတယ် - သူငယ်ချင်းတွေ ရှာကြတယ်။ Facebook ကနေ တစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း အသိမိတ်ဆွေတွေ အများကြီး ရခဲ့ပြီ - ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းတွေလည်း မနည်းမနောဆော့ခဲ့ဖူးပြီ - အဲ့တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ Games အတွေ့အကြုံတွေကို Top 20 Facebook Games ဆိုပြီးလည်း ရေးထားပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းလည်း Facebook ထဲမှာပဲ ဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်း အသစ်တွေ ထပ်ပေါ်လာတာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Facebook သုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက် တကယ်ရော စိတ်ကျေနပ်မှု ရခဲ့ရဲ့လား။
တကယ်တော့ လူဆိုတာ ဘယ်တော့မှ လိုလားချက် မပြည့်ဝနိုင်တဲ့ သက်ရှိတွေလို့များ ပြောရမလား ?? Facebook နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ သဘောမကျစရာတွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် ကျွန်တော် တစ်ချိန်က Facebook မှာ လယ်စိုက်တဲ့ FarmVilleဂိမ်းဆော့ခဲ့တယ်။ သူ့ သဘောက မျိုးစေ့လေးတွေ ချပြီးသွားရင် နောက်တစ်နေ့ ( သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ) စောင့်ပြီးတော့မှ ပေါက်လာတဲ့ အပင်လေးတွေက အသီးအနှံလေးတွေကို ပြန်ရိတ်သိမ်းရတာ။ ကျွန်တော်က တစ်ခါစိုက်ထားပြီးရင် ပုံမှန် ပြန်ဝင်ကြည့်ဖြစ်လေ့ မရှိဘူး - သူက နောက်တစ်ရက် ကြာမယ်လို့ ပြောထားရင် နောက်ရက် ဝင်ကြည့်ရမယ် ဆိုတာ သိပေမယ့် ဘယ်နှစ်နာရီ ပြန်ဝင်ကြည့်ရမယ် ဆိုတာမျိုးကို တွက်ပြီး မှတ်မထားမိတော့ တစ်ခါတစ်လေ နောက်ကျပြီး အပင်လေးတွေ သေသေသွားကြတယ်။ အပင်သေတော့ ပိုက်ဆံ မရဘူးပေါ့ဗျာ။ နောက်ပြီး ခဏခဏ ရောက်လာတတ်တဲ့ လက်ဆောင်တွေကို ကလစ်တစ်ခါ ပေးမှ တစ်ခုရတာမျိုး ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး။ Neighbors လိုလို့ Add ချင်ပြန်ရင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း တစ်ယောက်ချင်းစီ လိုက် Add နေရတယ်။ ပြောရရင် အချိန်ကုန်တယ်ပေါ့ဗျာ။ နောက်ပြီး ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း အယောက် ၁၀ဝ၀ ရှိတယ်ထား - နောက်နေ့ကျတော့ ၁၀ဝ၀ မပြည့်တော့တာမျိုးလည်း ဖြစ်ဖူးကြမယ် ထင်တယ်။ အလွယ်ပြောရရင်တော့ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကိုယ် Friend list ကနေ ဖျက်သွားတာမျိုးပေါ့ - ဒီလိုဆို ဘယ်သူက ဖျက်လို့ ဖျက်သွားမှန်းလည်း မသိ။ ပြန်ကြည့်လို့ ကလည်း မလွယ်။ အဲ့တာမျိုးတွေလည်း ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး။
နောက်ပြီး Mafia ဆော့ခဲ့ဖူးတယ်။ Mafia မှာ Job help ခေါ်တယ် ဆိုတာ ရှိတယ် - သူက တစ်ခါခေါ်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူအရေအတွက်အတိုင်း ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့် Job ကို ဝင်ကူမှ ပိုက်ဆံရော Mission ရော အပြည့်ရတယ်။ အဲ့မှာ ဖြစ်တာက Job help ခေါ်ရင် လူစောင့်ရတဲ့ ပြဿနာ - ဘယ်သူတွေ ဘယ်တော့ ဝင်ကူမလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် လူစောင့်ရတာမျိုး လုံးလုံး သဘောမကျဘူး - Friend lists ထဲက လူတွေကလည်း အဲ့တုန်းက Mafia ဆော့ကြတာ နည်းတော့ သိပ်လည်း အကူအညီတောင်းလို့ မရဘူး - Mafia ဆော့တဲ့ သူတွေကို ရှာပြီး Add ထားရင် ရပေမယ့်လည်း မသိတဲ့ သူတွေကျပြန်တော့ Job help လေး ကူခိုင်းချင်တာ တစ်ခုတည်း အတွက်နဲ့ Friend lists ထဲ မထည့်ချင်ဘူး - အဲ့တာနဲ့ ဘယ်လို လုပ်လဲ ဆိုတော့ Facebook အကောင့်ကို ၁၀ ခု မက လုပ်လိုက်တယ်။ နာမည်တွေတော့ မျိုးစုံ ပေးတာပေါ့ဗျာ - ဥပမာ - မိုက်ခဲလေး - လေးခဲမိုက် - ခဲမိုက်လေး စသဖြင့်ပေါ့ - ပြီးတော့ ဒီဘက် အကောင်ကနေ Job help ခေါ်ရင် ဟိုဘက် ၁၀ ကောင်ကနေ ခေါ်တဲ့ Job help ကို ပြန်လိုက်ကူတယ်။ ဒါဆို ဘယ်သူ့ကိုမှ မစောင့်ရတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို လုပ်တာတွေ ကြာလာပြန်တော့ စိတ်က မသက်မသာ ဖြစ်လာပြန်ရော။ Job help တစ်ခုကို အကောင့် ၁၀ ခုကနေ ဝင်ကူဖို့ ဆိုတာ Facebook အကောင့်ကို ဟိုဘက်ဝင်လိုက် ဒီဘက်ထွက်လိုက် ( ၁၀ ) ခါ မက လုပ်ရတယ်လေ - အဲ့တာကို သဘောမကျတော့ပြန်ဘူး။
စသဖြင့်ပေါ့ - ခုဖော်ပြခဲ့တာတွေဟာ Favourite websites တွေ ဆိုပေမယ့် စိတ်တိုင်းမကျ စရာတွေ ရှိတတ်တယ် ဆိုတာ မြင်သာအောင် ပြောပြတာပါ။ ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ စိတ်တိုင်းမကျမှုမျိုးတွေ လိုအပ်ချက်တွေက Facebook မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး - တစ်ခြား ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကျ Google - Youtube - Twitter - Flickr - MySpace စတဲ့ Websites တွေမှာလည်း အသုံးပြုကြတဲ့ ပုံစံပေါ် မူတည်ပြီး သဘောမကျကြတဲ့ အချက်တွေ ရှိတတ်ပါတယ် - တကယ်တော့ ဒီလို အခက်အခဲလေးတွေ အလိုမကျမှု လေးတွေဆိုတာ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို့ ဖြေရှင်းနည်း မသိခဲ့လို့ပါ။ ဖြေရှင်းနည်း မသိတော့ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရတယ်။ လူပင်ပန်းရတယ်။ အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့တယ်။ အဲ့တော့ Favourite websites တွေကို Browser ကနေ Access လုပ်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ် မလိုချင်တာတွေ ပျောက်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း တော်တော်များများ တူလာအောင် - လိုချင်တဲ့ Features လေးတွေ များများစားစား ပါလာအောင် ဘယ်လို ဖန်တီးယူကြမလဲ။
Userscripts များ အကြောင်း
Userscripts အသုံးပြုခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
အတိုချုံး ပြောရရင် Userscripts တွေ အသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသလို အလိုမကျ ဖြစ်နေတဲ့ လိုလားချက်တွေကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာလေးတွေ တစ်ခုနှစ်ခုလောက် လေ့လာကြည့်ရအောင် - ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဂိမ်းဆော့ခဲ့စဉ် တစ်ချိန်တုန်းက Facebook account တွေကို ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် လုပ်ရတာမျိုးကို သဘောမကျဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အခက်အခဲကို ပြေလည်နိုင်စေဖို့Facebook Switch Accounts ဆိုတဲ့ Script ရှိပါတယ်။ Google Chrome သုံးသူများ သူ့ကို ဒီနေရာမှာ တိုက်ရိုက် Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို Install လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ Facebook ထဲကို ဝင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Switch Accounts ဆိုတဲ့ Menu တစ်ခု အပိုပါလာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူကနေ တစ်ဆင့် Add Account ဆိုတာကို ဆက် Click ပေးပြီး ပေါ်လာမယ့် Box မှာ လက်ရှိ Account ကနေ Switch လုပ်ချင်တဲ့ Acoount ကို ဖြည့်ပေးပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ နောက် Account တစ်ခုကို အဝင်အထွက် ခဏခဏ လုပ်စရာမလိုပဲ Click တစ်ချက်နဲ့ ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။
ဒါတင်ပဲလား - မကသေးပါဘူး - ဥပမာ FarmVille မှာ Neighbors လို နေတဲ့သူတွေ - အလိုလျောက် Neighbors Add ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်းFacebook Auto Neighbor Adder ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သူ့ကို သွင်းထားပြီး Neighbor page ကို သွားလိုက်တာနဲ့ ရှိနေတဲ့ သူတွေကို အလိုလျောက် ဆင့်ခေါ်စာ ပို့သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်နဲ့တင် မပြီးသေးဘူး - Farmville Harvest Calculator ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။ သူကတော့ စိုက်ပျိုးချိန်နဲ့ ရိတ်သိမ်းချိန်ကို အလိုလျောက် တွက်ချက်ပေးနိုင်တယ်။ အရိတ်နောက်ကျလို့ လယ်ပျက်ရတာမျိုး မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ -
နောက်ပြီး Unfriend Finder - သူကတော့ Facebook မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို သူ့ရဲ့ Friend lists ထဲကနေ ဖျက်ထုတ်လိုက်တာမျိုး ရှိရင် ကိုယ့်ကို ဘယ်သူကတော့ မင်းကို သူငယ်ချင်း အဖြစ်က ရပ်စဲလိုက်ပြီ ဆိုတာ အသိပေးပေးတယ်။
နောက် ခဏခဏ Gifts တွေ ရောက်ရောက်လာပြီး တစ်ခုချင်းစီကို Accept လုပ်ရတာ ပျင်းနေသလား - ဒါဆိုလည်း LotsGiftsAccepter ဆိုတာ ရှိတယ်။ သူက ဝင်လာသမျှ Gifts တိုင်းကို Auto လက်ခံပေးသလို ကိုယ့်ဆီ ပို့ပေးတဲ့ သူတိုင်းကိုလည်း အလိုလျောက် Gifts ပြန်ပို့ပေးတယ်။ အကောင့်ထဲမှာ လူတွေ အရမ်းများနေလို့ ဖျက်ထုတ်ချင်ပြန်ပြီ ဆိုရင်လည်း FacebookDeletes ဆိုတာ ရှိတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့် account ထဲမှာ လူရှိပေမယ့် ကိုယ်ဆော့တဲ့ ဂိမ်းမှာ သူငယ်ချင်းနည်းနေတယ် ဆိုပြန်ရင်လည်း ကိုယ့် Friend lists ထဲက အဲ့ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုFacebook Invites သုံးပြီး တစ်ခါတည်း အများကြီး Invite လုပ်လို့ ရတယ်။ ဒါတင်မက FarmVille မှာ Bonuses ယူတာ - အကောင်မွေးတာ - ဆီယူတာ - ကြက်ဥဖောက်တာ - ဆိုတာတွေ အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းကနေ စီမံခန့်ခွဲပေးမယ့် FarmVille Wall Manager ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။
ခုဖော်ပြခဲ့တာတွေက Userscripts တွေ အသုံးပြုခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေထဲက ကဏ္ဍအသေးအဖွဲ လေးတွေပါ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကဏ္ဍအစုံက Userscripts တွေကို ဒီနေရာကနေ တဆင့် သွားရောက် ကြည့်ရှု အသုံးချနိုင်ပါသေးတယ်။
Userscripts များ အသုံးချနိုင်စေရန် ပြင်ဆင်ခြင်း
နောက်ပြီး ခု ဥပမာ ပေးခဲ့တဲ့ နေရာမှာ Google Chrome ကနေ အသုံးပြုပုံကိုပဲ ကျွန်တော် အဓိက ဥပမာပေး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းက Google Chrome ဟာ Userscripts သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားဘာမှ ထပ်သွင်းစရာမလိုပဲ Support ပေးထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။ တကယ်လို့ မိသားစုဝင်များ Firefox သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Userscripts တွဲဖက် အသုံးပြုလို့ ရအောင် အရင်ဆုံး Greasemonkey သွင်းထားဖို့ လိုပါတယ်။ Safari မှာ ဆိုရင်တော့GreaseKit ဆိုတာ သုံးရပါမယ်။
Userscripts အသုံးပြုခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ
ရွေးချယ်မှု ရှိလာတဲ့ အကြောင်းအရာတိုင်းမှာ ကောင်းကျိုးဆိုတာ ရှိသလို ဆိုးကျိုးဆိုတာလည်း တွဲပါလာတတ်ပါတယ်။ Userscripts ဆိုတာဟာ Scripting language ကို အသုံးပြုပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူရေးထားတဲ့ Language ကို နားမလည်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် တွေ့သမျှ Userscripts တိုင်းကို မဆန်းစစ်ပဲ သုံးမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ Userscripts တွေမှာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကို ပျက်စီးစေနိုင်မယ့် ( ဝါ ) ကိုယ့်ရဲ့ Personal informations ကို ခိုးယူမယ့် Scripting language တွေလည်း ရောပါနေတတ်လို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် Userscripts တစ်ခုကို သုံးမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိရင် ဖြစ်သင့်တာ -
( ၁ ) Rating ကို ကြည့်ပါ။
( ၂ ) Posts တွေကို လေ့လာပါ။
( ၃ ) Fans တွေကို စစ်ဆေးပါ။
( ၃ ) Installs အရေအတွက်ကို အကဲခတ်ပါ။
ဒါမှသာ Userscripts တွေကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ အသုံးချရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ Userscripts များ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိသားစုဝင်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးချနိုင်ကြပါစေ။
3:22 AM LeaveaComment
လူ့သက်တမ်း တစ်ဝက်ကျိုးပြီ ထင်တယ် - ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိ ခြေတစ်လှမ်း မလှမ်းရသေးဘူး - ဒီ ခြေလှမ်းလှမ်းမယ့် အချိန်ကိုပဲ စောင့်နေတဲ့ သူရှိတယ် - ဘာဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ - လူလေကွာ - စိတ်မပါတဲ့ အရာကို ဖြစ်ညှစ်လုပ်ပြီး အောင်မြင်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ သူ ကမ္ဘာမှာ မင်း ဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့ဖူးလို့လဲ - ရှိချင်လည်း ရှိမှာပေါ့ - ငါ ဗဟုသုတ နည်းတာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်တော့ ဖြစ်လာမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ စကားတွေ ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကို မပြောကြစမ်းပါနဲ့ - ငါ အဲ့စကားတွေနဲ့ ငါ့ အနာဂတ်ကို ငါ့ဘာသာ အမှောင်ချပြီး ဖြတ်သန်းလာတာ ဆယ်စုနှစ် တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ - ဘယ်မှာတုန်း နောက်တော့ - ဘယ်မှာတုန်း ဖြစ်လာမှာပေါ့ - ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူး တွေ့ကြလား - ငါဆိုတဲ့ကောင် မနေ့ကလည်း ဒါပဲ - ဒီနေ့လည်း ဒါပဲ - အဲ့ဒီ့ နောက်တော့ ဆိုတာကို မျှော်မှန်းပြီး ရေလိုက် ငါးလိုက် နေလာတာ - ခု ငါဆိုတဲ့ ကောင် ရေထဲက ငါးသာသာဖြစ်နေပြီ - ဘယ်တော့ ငါ့ကို ပိုက်ကွန်ချမလဲ ဆိုတာ ငါတွေးကြောက်နေရပြီ။
ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးတွေ အကြိမ်ပေါင်းမနည်း ဖြစ်တည်ခဲ့ဖူးပေမယ့် လူကြီးနဲ့ လူငယ် သဟဇာတ မမျှတမှုတွေ ကြားမှာ သူတို့တွေဖြစ်စေချင်တဲ့ အတိုင်း အဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကို အဖန်တရာတေနေတဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုး ဘဝတွေကြား ဈေးပေါပေါချရောင်းပြီး အပျင်းကြော အကြိမ်တစ်ရာမက ဆန့်ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့လိုက်တယ် - ခေါက်ရိုးချိုးခံရတာ များလို့လား မသိဘူး ခုတော့ အကြောတွေ ဆိုင်းနေပြီ - မတ်မတ်ရပ်ဖို့ ရုတ်တရက် ခါးကို ဆန့်တော့ ငါ့ခါးနောက်က မျက်ကနဲ အချက်ပြတယ် - ဒါ ဆုတ်ယုတ်မှုလား -
ဟင့်အင်း မလုပ်ကြပါနဲ့ - ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကို မတ်မတ်ရပ်ခွင့် ပြုကြပါ - ငါ့လေကို ငါရှုပါရစေ - ငါ့အနာဂတ်တွေကို ငါ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကြည့်ခွင့် ရပါရစေ - ငါ့ အိပ်မက်တွေမှာ ငါကိုယ်တိုင်ပဲ ခြယ်လှယ်ခွင့် ရပါရစေ။
ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး Angry Birds ဂိမ်းလေး အခု Browser ထဲမှာ ဆော့လို့ ရနေပြီ - အရင်ထိပ်ဆုံးမှာ တင်ပေးခဲ့တုန်းက စက်ထဲမှာ Install လုပ်ရတာတွေ ဘာတွေနဲ့ မျက်စိနောက်စရာကောင်းနေတာ - ခု ဘာတစ်ခုမှ Install စရာမလိုပဲ Browser ကနေ တန်းဆော့လို့ ရတော့ ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်။ Angry Birds ချစ်သူများ chrome.angrybirds.com မှာ ခုပဲ သွားရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါပြီ။
တကယ်လို့ URL မှတ်ထားရတာ ဝါသနာ မပါဘူးဆိုရင်လည်း Angry Birds ကို Chrome app တစ်ခု အနေနဲ့ Google Chrome ထဲမှာ ထည့်ထားလို့ ရပါတယ်။ Google Chrome - Chrome နဲ့ ပြောပြောနေလို့ ဒီ Angry Birds ကို Google Chrome တစ်ခုတည်းမှာပဲ ဆော့လို့ ရတာ မဟုတ်ပါဘူး - IE - Mozilla နဲ့ တစ်ခြား Browser တွေမှာပါ chrome.angrybirds.com ကနေ တစ်ဆင့် စိတ်ကြိုက် ဆော့နိုင်ပါတယ်။
အရင်ပထမရေးထားတဲ့ ပို့စ်မှာကတည်းက ဌက်နဲ့ဝက် ဘာလို့ ဒီလောက် ကမ္ဘာမကျေ ဖြစ်နေကြလဲ ဆိုတာ တစ်ခါ ပြောထားခဲ့ဖူးတယ်။ ခု ဒီ့ထက်ပိုပြီး ဖြစ်ကြောင်းရယ်မှ ကုန်စင် နားလည်ချင်တယ်ဆိုရင် နောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Video clip လေးကို တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ။ ဌက်တွေ ဘာလို့ဒီလောက်တောင် ဒေါသထွက်နေကြတယ် ဆိုတာ ပိုသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။
LVL ခိုးနည်း နိဿရည်း
Angry Birds မှာ lvl တစ်ခုကို3Stars ရဖို့ တစ်ချို့အဆင့်တွေမှာ တော်တော်လေး ခက်တာ ဆော့ဖူးသူတိုင်း သိကြလိမ့်မယ်။ အဲ့အတွက်တော့ မပူနဲ့ - lvl အားလုံး3stars ရအောင်ခိုးနည်း ရှိတယ် အထူးသဖြင့်တော့ lvl ကျော်ပြီး ဆော့ကြည့်ချင်သူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။
လုပ်ရမယ့်နည်းက Game ကိုဖွင့်ထားပြီး အောက်မှာ Quote နဲ့ ပြထားတဲ့ စာကြောင်းကို Browser address bar မှာ Copy > Paste လုပ်ယုံပဲ။
နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ချင်ရင် ဒီအောက်က စာကြောင်းကို ပြန် Copy > Paste လုပ်။
ဒီနည်းက မနေ့က Wesbos မှာ စာဖတ်ရင်းနဲ့ သိလာတာ။ Thanks to Wesbos who found this hack.
ပြောစရာလည်း ကုန်ပြီ - ဆော့ဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ Bye!
Amit Agarwal ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်က လူဖတ်အများဆုံး how-to blogs တွေထဲက blog တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Digital Inspiration Blog ကို ဦးစီးတည်ထောင် ရေးသားနေသူ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော် သူ့ ဘလော့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က စဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ထင်တယ်။ Amit ရဲ့ အရေးအသားတွေကို ကျွန်တော် သိပ်မဘောကျတယ် - သူက စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် ရှာတယ် - ကျကျနနရေးတယ်။ စာဖတ်သူ ဘာဖတ်ချင်လဲ ဆိုတာ သူကောင်းကောင်းသိတယ်။ သူ့အကြောင်း အသေးစိတ်နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
သူ့ ဘလော့မှာ စာဖတ်ရင်း ကျွန်တော် မသိသေးတာတွေ တော်တော်များများ သိခဲ့ရသလို ကျွန်တော် သိခဲ့တာတွေကိုလည်း ကျွန်တော့်မိသားစုဆီ ဝေမျှပေးနိုင်ခ့ဲတယ်။ ကျွန်တော့်ကို စာဖတ်ချင်စိတ် ဖြစ်လာအောင် ပထမဆုံး စွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ ( မြင်ဆရာ ) လို့ သုံးနှုန်းမယ်ဆိုရင်လည်း မှားမယ် မထင်ဘူး။ ခုလည်း မနေ့က MaintainaGood Posture While Using your Laptop ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေး ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဖတ်ပြီးပြီးချင်း ကျွန်တော် အရင်ရေးဖူးတဲ့ အင်တာနက်နှင့် ကျန်းမာရေး ခေါင်းစဉ်လေးကို ပြန်သတိရမိတာနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စုံစုံလင်လင်လေး ဖြစ်သွားအောင် ဒီအောက်မှာ ထပ်ပေါင်းရေးလိုက်ပါတယ်။
Laptop computer သုံးနေသူတွေအတွက် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ သတိမထားမိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Video clips တွေက မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း သတိထား မြင်သာမိစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Video clips လေးတွေကို ကြည့်ပြီးရင် ကွန်ပြူတာ သမားတွေ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား ပျက်ယွင်းမှုဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိနေတယ် ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို ပြင်ဆင်နေထိုင်သင့်မယ်ဆိုတာ သိသာစေပါလိမ့်မယ်။
Video A: သူကတော့ အိမ်မှာ ( ဒါမှမဟုတ် ) ရုံးမှာ Laptop သုံးတဲ့ အချိန် ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ် ဆိုတာ သင်ကြားပေးပါတယ်။
Video B: သူကတော့ ခရီးသွားနေစဉ် အတောအတွင်း ( ဒါမှမဟုတ် ) Hotel တစ်ခုမှာ Laptop သုံးတဲ့ အချိန် ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ် ဆိုတာ သင်ကြားပေးပါတယ်။
အင်တာနက်ဆိုတာ လေ့လာနည်း မသိခဲ့ရင် ဘာမှ လေ့လာစရာမရှိတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးသီးသန့် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုလိုပဲ - အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်းဟာ ကောင်းလား ဆိုးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြိမ်ဖန်မနည်း မေးခဲ့ဖူးတယ် - အဲ့မေးခွန်းကိုပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိမ်ဖန်မနည်း ဖြေခဲ့ဖူးပြီ - ဒါပေမယ့် အင်တာနက် သုံးလာခဲ့တာ ကာလအပိုင်းအခြား တစ်ခုကို ရောက်လာခဲ့တော့ အင်တာနက်ရဲ့ ကောင်းမွေဆိုးမွေတွေ အကြောင်းကို တော်တော်လေး တီးမိခေါက်မိ ရှိလာခဲ့ပြီ -
တစ်ချို့ လူကြီးတွေက အင်တာနက် သုံးတာ မကောင်းဘူးလို့ မြင်တယ်။
တစ်ချို့ လူငယ်တွေက အင်တာနက်ဟာ မရှိမဖြစ်လို့ ယူဆတယ်။
အင်တာနက်ကြောင့်ပဲ လူငယ်တော်တော်များများ ပျက်စီးနေကြတယ်။
အဲ့ဒီ့ အင်တာနက်ကြောင့်ပဲ လူငယ်တော်တော်များများ ထိပ်ကို ရောက်သွားကြတယ်။
တကယ်တော့ အင်တာနက်ဟာ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေဆိုတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ဖန်တီးမပေးဘူး - အင်တာနက်သုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေဆိုတာ လူငယ်တွေ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖန်တီးနေကြတာ။ တကယ်တော့ အင်တာနက်ဟာ လေ့လာမယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေအတွက် တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရတဲ့ ပညာရေးရင်းမြစ်တွေ မကုန်မခမ်းနိုင်အောင် ရိှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများကတော့ ရောထွေးနေတယ်။ လူဆိုတဲ့ သဘောက ကောင်းကောင်းကန်းကန်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာဆိုရင် ဘယ်သူမှ အလကား မပေးချင်ကြဘူး - ဥပမာ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိမှ - ကိုယ့်အတွက် ချက်ချင်း မကျိုးမဖြစ်တောင် နောက်တစ်ချိန်မှာ အကျိုး ရှိကောင်း ရှိလာနိုင်မယ်လို့ ထင်မှ ပေးကမ်းပါတယ် စွန့်ကျဲပါတယ် လှူဒါန်းပါတယ် အမည်ခံပြီး ပေးချင်ကမ်းချင် ကြတာမျိုး။ ဒီလို လူတွေက ဘဝထဲမှာတင် ရှိတာမဟုတ်ဘူး - အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်း ရှိတယ်။ အဲ့လို လူတွေများလာတော့ နောက်ပိုင်း ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ ဆိုရင် သူလိုကိုယ်လို လူတော်တော်များများက အလကားပေးတာဆို အင်လို့ပဲ ထင်ကြတော့တယ်။ ပိုက်ဆံလေး ပေးပြီးဝယ်သုံးလိုက်ရမှ အစစ်ရတော့ မလိုလို - ငွေလေးပေးလိုက်ရမှ အပြည့်အတင်း ရတော့မလို ထင်မှတ်လာကြတယ်။ တကယ်တော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အလကားမတ်တင်း ပိုက်ဆံတစ်ပြားတစ်ချပ် မရပဲ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေထဲကနေ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ အချိန်ပေးပြီး မျှဝေပေးနေတဲ့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးသူတွေ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကောင်းတွေ တော်တော်များများကို ရှိပါတယ်။
တစ်ချို့က စာအုပ်စာတမ်းတွေ Free ပေးတယ် - တစ်ချို့က Video clips တွေလုပ်ပြီး ဝေမျှတယ် - လူတစ်မျိုး ပုံစံတစ်ခုနဲ့ ဝေမျှနေကြတာကို ကြည့်ပြီး တစ်ချို့က အလကားမတ်တင်း ရတဲ့ ဒီဝေမျှကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကဲ့ရဲ့နေကြတာ ရှိတယ်။ တကယ်တော့ မျှဝေမှုတစ်ခု ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ သီးသန့်အမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ ပိုင်းဖြတ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ Professor တစ်ယောက်ဆိုရင် Techanical terms တွေကို ကောင်းကောင်း သိတာမို့လို့ ဆွေးနွေးမှု တစ်ခုကို ကြည့်တဲ့ အခါ သူကျွမ်းကျင်ပြီးသား စာလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြတာမျိုးကို ပိုပြီး သဘောကျကောင်း ကျလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Techanical terms ကိုဘာမှ မသိတဲ့ လေ့လာသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ တတ်နိုင်သမျှ အခြေခံအကျဆုံးထိ ဆင်းပြီး ရှင်းပြတာမျိုးကို ပိုလိုချင်လိမ့်မယ်။ အဲ့တော့ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုပေါ် မူတည်ပြီး လိုလားချက်က ပြောင်းသွားတာမို့လို့ ဒီလိုမျိုး ကိစ္စတွေက အငြင်းပွားနေဖို့ မသင့်ဘူး။ ကျွန်တော့် အမြင်နဲ့ ပြောရရင်တော့ သင်ကြားမှုတစ်ခုဟာ သင်ယူမယ့်လူရဲ့ အခြေခံအရည်အသွေးကို လိုက်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ အသေးစိတ်တာ အဖြစ်သင့်ဆုံးပဲလို့ ထင်မိတယ်။
အဲ့တာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကိုယ် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ပညာရေးစနစ် - ကိုယ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မြန်မာမှု ပညာရေး အသိုင်းအဝိုင်းကို ပြန်ကြည့်တော့ လွဲမှားနေတာတွေလည်း မနည်းမနောတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ -
ကျွန်တော်တို့ကို ကလေးတစ်ယောက်က သူနားမလည်တဲ့ သချာင်္ပုစ္ဆာ တစ်ပုဒ်ကို ဖြေရှင်းနည်း လာမေးပါပြီတဲ့ - ကျွန်တော်တို့ သူလာမေးတဲ့ ပုစ္ဆာကို ကြည့်လိုက်တော့ အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင် အဖြေက တန်းထွက်နေပြီ - သူ့အတွက် အရမ်းခက်ခဲနေတဲ့ ပုစ္ဆာလေးကို ကျွန်တော်တို့ တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် - ပုစ္ဆာက -
ဒီပုစ္ဆာကို ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်ကနဲကြည့်တော့ x ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ2ဆိုတဲ့ အဖြေကို ချက်ချင်း တန်းရတယ် - အဖြေတန်းရတာတော့ ဟုတ်ပြီ - အဲ့အဖြေဘယ်လို ရတယ်ဆိုတာ ကလေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ရှင်းပြကြမလဲ ? ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ ပညာရေး စနစ်ကို တစ်ချက်လောက် ပြန်ဆွဲခေါ်ကြည့် ကြရအောင်။ ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာ ဘာလာလာ အလွတ်ကျက် ပညာရေး စနစ်ဖြစ်တယ်။ 7x = 14 ဆိုတဲ့ ပုစ္ဆာကို မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို စာလာမေးရင် ကျွန်တော် အရင်ဆုံး မှတ်ချက်ပေးမိမှာတော့ မင်းအလီမကျက်ဘူးလားဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ပဲ ဖြစ်မှာပဲ။
သွား အလီစာအုပ်ယူ - အလီ ခုချက်ချင်း ကျက်
အလီရရင် ပြန်လာခဲ့ - အလီကျက်လို့ ရရင် ဒီ ပုစ္ဆာမင်းတွက်လို့ ရလိမ့်မယ်။
ကလေးက ကျက်ပါပြီ -
တစ်တစ်လီ တစ် - နှစ်နှစ်လီ နှစ်
လေးနှစ်လီ ရှစ် - ဆယ့်နှစ် နှစ်လီ နှစ်ဆယ့်လေး
ကျက်လို့ ရသွားတော့ ကလေးက ပြန်လာပြီ -
ဒီမှာတွေ့လား ပုစ္ဆာက 7x = 14 - အဲ့တော့ x နဲ့ မြှောက်ထားတဲ့7ကို ညီမျြှခင်းရဲ့ ဟိုဘက်ကို ပို့ - ဒီဘက်မှာ7က x နဲ့ မြှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ ဟိုဘက်ခြမ်းကို ရောက်ရင် 14 ကို7နဲ့စား။ အဲ့လို စားတော့ ခုနှစ် နှစ်လီ 14 မဟုတ်ဘူးလား - အဲ့တော့ x =2ရတယ်။ ဒါ ကျွန်တော်တို့ ရှင်းပြနေကျ နည်းပဲ။ အဲ့တော့ အဖြေကတော့ ထွက်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီ သင်ကြားမှု စနစ်ကနေ ကလေး ဘာရသွားသလဲ ?? တကယ်တော့ ကလေးဘာမှ မရပါဘူး - ကလေးစိတ်ထဲမှာ ဒီပုစ္ဆာကနေ ပညာမရပဲ ငါအလီ မရရင် ဒီပုစ္ဆာတွက်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ Pressure ပဲ ရသွားတယ်။ဒါဟာ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပညာရေး ရည်မှန်းချက် ဆုံးရံှုးမှုတစ်ခုပဲ။ ဒီမှားယွင်းတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ရှင်သန်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်ကြားမှုစနစ်ကြောင့် Pressure ဒဏ်ကို မခံနိုင်တဲ့ လူငယ်တော်တော်များများ ပညာရေးကို စိတ်ကုန်သွားကြတယ်။ တစ်ချို့လူငယ်တွေ ပညာရေးတစ်ပိုင်း တစ်စနဲ့ လမ်းမှားလိုက်သွားကြတယ်။
အဲ့တော့ 7x = 14 ဆိုတဲ့ ပုစ္ဆာကနေ အလီကျက်စရာ မလိုပဲ ကလေးတစ်ယောက်ကို ဖြေရှင်းနည်း ဘယ်လို သင်ပေးကြမလဲ။ တကယ်တော့ 7x = 14 ဆိုတာ x ကို ခုနစ်ကြိမ် ခုနစ်ခါ ပေါင်းထားခြင်းဟာ 14 နဲ့ ညီတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို ကလေး အရင် သိထားဖို့ လိုတယ်။ ဆိုလိုတာ -
x + x + x + x + x + x + x = 14 ပေါ့
အဲ့ကနေ ညီမျြှခင်း တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချိုးညီအောင် ပိုင်းပြီး အဖြေရှာရင် အလီကျက်စရာမလိုပဲ အဖြေရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ရွယ်စဉ် တစ်ချိန်က မသိခဲ့ကြဘူး။
တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းအရာက Khan Academy အကြောင်းရေးထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို ဖတ်မိပြီး စိတ်ထဲ ဖြစ်မိတာလေးကို ပြန်ရေးထားတာပါ။
Khan Academy ဆိုတာ လေ့လာသူ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက် Free educational videos တွေကို ဝေမျှပေးနေတဲ့ ပညာရေး ဆိုဒ်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က "Deliveraworld-class education to anyone anywhere." ပါ။ ပြောရရင် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ပြီးတဲ့ ပိုက်ဆံတစ်ပြားတစ်ချပ် မရပဲ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေထဲကနေ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ အချိန်ပေးပြီး မျှဝေပေးနေတဲ့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုဒ်ကောင်း တစ်ခုပေါ့ - အံ့သြဖို့ ကောင်းတာ ဆိုဒ်ကို တည်ထောင်ပြီး lessons ပေါင်းများစွာကို အခမဲ့မျှဝေပေးနေတဲ့ Mr.Khan ရဲ့ အားထုတ်မှုပါပဲ။
အဲ့မှာ တင်ပေးထားတဲ့ Videos တွေကို ကြည့်မိတော့ ဘာမှ အတွေ့အကြုံ မရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုတောင် နားလည်နိုင်အောင် ရှင်းပြပေးနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။ သွား ခု အလီကျက်ဆိုတဲ့ Pressure ပေးနည်းမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုလေးကို အစမ်းကြည့် ကြည့်ပါ။
အဲ့တော့ ဘာသွား သတိထားမိလည်းဆိုရင် နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာ ခဏဘေးချိတ်ထားလိုက်ဦး ကျွန်တော်တို့ သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ်ပညာရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ခေါင်းဟာ Pressure ပညာရေး ကို လက်ဆင့်မကမ်းမိဖို့ အများကြီး လေ့လာဖို့လိုပြီ ဆိုတာ သတိထားမိ လာခဲ့တယ်။
အဲ့တော့ နိဂုံးချုပ်ချင်တာ မိသားစုဝင်များ အနေနဲ့ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ဘဝအတွက် အကျိုးပြုမယ့် လေ့လာမှုတွေ လုပ်ဆောင်ကြပါ - လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြပါ။ အင်တာနက်ကြောင့် ပျက်စီးရတဲ့ လူငယ်မျိုး မဖြစ်စေပဲ - အင်တာနက်ကြောင့် ထိပ်ကို ရောက်သွားတဲ့ လူငယ်တွေ ဖြစ်လာဖို့ တည်ဆောက်ကြပါလို့ အဆုံးသတ်မှာလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်ကို စခဲ့တုန်းကတော့ Angry Birds ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ စခဲ့တယ် - နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် မိသားစုဝင်တွေကို ဆော့စေချင်တဲ့ ဂိမ်းလေးတွေ များများလာတော့ Angry Birds ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် တစ်ခုတည်းနဲ့ အဆင်မပြေတော့ဘူး - အဲ့တာကြောင့် All Smart Games ဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်းပြီး ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ခု ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြသွားမယ့် ဂိမ်းတွေဟာ ကျွန်တော် http://allsmartgames.com/ ကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး သီးသန့် ပြန်တင်ပေးယုံ သက်သက်ပါ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ http://allsmartgames.com/ မှာ တင်ပေးထားတဲ့ ဂိမ်းလေးတွေဟာ အကုန် Full ပေးထားတယ် - ဘာ Crack တို့ Patch တို့မှ သုံးစရာမလိုဘူး - ဒါပေမယ့် သူတို့က တင်ပေးရင် FileSonic ကနေပဲ တင်ပေးတယ် - FileSonic က ဒေါင်းလုပ်ချရတာ အရမ်း စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ် - အဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော် တင်ပေးရင် သုံးနေရာခွဲပြီး တင်ပေးမယ် - Up4Vn - MultiUpload နဲ့ MediaFire - အဲ့နေရာ သုံးခုကနေ တင်ပေးမယ်။ ကလေးဂိမ်းလို့ ပြောလို့ ရပေမယ့် ဆော့တာတော့ တကယ်ဆော့လို့ ကောင်းတယ် - လောလောဆယ် Farm Mania – Hot Vacation တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆော့နည်းကလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ ဘာမှ သိပ်မရှိဘူး - Mouse click ကို မြန်မြန်နဲ့ မှန်မှန် ပေးတတ်ဖို့လိုတယ်။ အချိန်နဲ့ ဆော့ရတယ်။ http://allsmartgames.com/ မှာ သွားကြည့်လို့ ကိုယ်ဆော့ချင်တဲ့ ဂိမ်းမျိုးလေးတွေ တွေ့ပေမယ့် ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း တောင်းခဲ့နိုင်တယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်တို့ ကူညီပေးပါမယ်။
Download via Up4Vn!!
Farm_Mania_-_Hot_Vacation.rar (73.74 MB)
Download via MultiUpload!!
Farm Mania - Hot Vacation.rar (73.7 MB)
Download via MediaFire!!
Complete Guide For Proxy Users
ဒီအကြောင်းက ကိုနိုးတူးကို စာပြန်ဖို့ ရေးရင်းနဲ့ အားလုံးအတွက် အကျိုးပြုလိမ့်မယ်ထင်လို့ သီးသန့် Thread ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုနိုးတူးကို စာပြန်ထားတဲ့ ပုံစံလေးအတိုင်းပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
အကို Kznt ကျွန်တော် Proxy Switcher ဆိုတဲ့ Extension ကို မသုံးတတ်ဘူးဖြစ်နေလို့.. ဘယ်လို အသုံးပြုရပြီး ဘယ်လိုမျိုး အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာ ရှင်းပြပေးနိုင်ရင် ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်.. ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်ပါ အကို..
ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သမျှထဲမှာ Proxy Switcher လို့ရယ်တော့ တစ်ခါမှ မမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ဖူးသလိုပဲ - Proxy Switchy! ကို ပြောတာလား မသိဘူး။
Proxy Switchy! သုံးနည်း သိချင်တာဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး ပြောရခက်မယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူ့ မူရင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှာကို FAQs ဆိုတာ မရှိဘူး - အဲ့လိုဖြစ်ရတာကလည်း သူ့တည်ဆောက်ပုံကိုက Google Chrome Browser ကနေ ယူသုံးထားတဲ့ ကွန်ပြူတာ ထဲမှာ ရှိနေပြီးသား System proxy settings ကို User တွေအတွက် ပိုသုံးရလွယ်အောင် Extension တစ်ခုအနေနဲ့ ထုတ်ထားတာမို့လို့။ အဲ့တာကြောင့် Proxy Switchy! သုံးဖို့ အတွက်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မေးခွန်းသုံးခုကို နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
( ၁ ) Proxy ဆိုတာဘာလဲ ??
( ၂ ) Proxy အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းဘယ်နခု ရှိသလဲ ??
( ၃ ) Proxies အသုံးပြုနည်း တွေက ဘယ်လိုတွေလဲ ??
ဒါမေးခွန်းတွေကို အခြေခံ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ လူတော်တော်များများ သိထားကြတာတော့ Proxy ဆို ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုခုကို ကျော်တဲ့ ဘန်းကျော်လို့ပဲ အလွယ်ပြောကြတယ်။ တကယ်တမ်းက Proxy သုံးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ အဲ့လောက် သိထားယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ခု ဒီနေရာမှာ Proxy အသုံးပြုနည်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အထက်မှာ ပြောထားခဲ့တဲ့ မေးခွန်းသုံးခုကို အတိုချုံး ရှင်းပြသွားပါမယ်။ အတိုချုံးလို့ ပြောရတာကလည်း အကျယ်မရှင်းပြနိုင်လို့ပါ။ Proxy အကြောင်းက လေ့လာရင် လေ့လာသလောက် ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာဆဲပါ။ အများကြီး မသိသေးပါဘူး။
Proxy ဆိုတာ Computer တစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် Server တစ်ခုကနေပြီး ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ရောက်အောင် ကြားခံ Services တစ်ခုခု ယူပြီး လှည့်ထွက်တဲ့ နည်းကို ခေါ်ပါတယ်။ မြင်သာအောင် အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါ။
အဲ့လို Proxy ခံပြီး လှည့်ထွက်ခြင်း အားဖြင့် ဘာတွေ အားသာချက် ရသလဲဆိုတော့ အသုံးပြုသူရဲ့ Privacy ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုတွေ ရလာတယ်။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာကို တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တယ်။ နောက်ကွယ်ကနေ IP address ကို ခြေရာခံပြီး တကောက်ကောက် လိုက်နေတာမျိုး မခံရတော့ဘူး - ဒီ့ထက် မြင်သာအောင် ဥပမာ ပေးရရင် ကိုယ်က Proxy သုံးထားတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့် IP address ကို ခြေရာခံ လိုက်ရင် ကိုယ်ရှိနေတဲ့ IP address အစစ်အမှန်ကို မရနိုင်ပဲ Server မှာ သုံးထားတဲ့ IP address ကိုပဲ သူရမှာမျိုးပါ။ စသဖြင့် အားသာချက်တွေ ရှိတာမို့လို့ ခုနောက်ပိုင်း Proxy က လူတိုင်း ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားလာတယ်။
Proxy connections ကို အသုံးပြုဖို့ အခြေခံအားဖြင့် မှတ်ထားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ( ၃ ) ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့တာတွေက -
နည်းလမ်း ( ၁ ) >> Web စာမျက်နှာမှနေ၍ တဆင့်ခံ ကျော်ယူသောနည်း - ဒီနည်းက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှာတင် ကျော်ခွမယ့်ဆိုက်များ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မိသားစုဝင် တော်တော်များများ အသုံးတည့်နေကြတဲ့ ကျော်ခွဆိုဒ်လေးတွေ ဝင်ရေးနေကြတာ ရှိတယ်။ အဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်တို့က Web Proxy လို့လည်း ခေါ်တယ်။ Free web proxy တွေကို ဒီဖိုရမ်မှာ ဖော်ပြထားတာတင် မဟုတ်ပဲ ဒီ့ထက်များများ ပိုလိုချင်ရင် Google မှာ Free web proxy လို့ ရိုက်လိုက်ယုံနဲ့ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
နည်းလမ်း ( ၂ ) >> Browser ၏ Proxy settings မှနေ၍ ပြင်ဆင် ယူသောနည်း - အဲ့တာကတော့ Google Chrome မှာဆိုရင် Options > Under the Hood > Network > Change proxy settings မှာ ရှိတယ်။
အဲ့ဒီ ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာတွေမှာ ထည့်ဖို့ Port တွေနဲ့ Address တွေကိုတော့ ကျော်ခွမယ့်ဆိုက်များ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြထားတာ ရှိသလို -ချိန်းချင်သလောက်ချိန်း proxy ဆိုပြီး ဖော်ပြထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ အင်တာနက်ထဲကနေ ရှာချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Google Search ကနေပြီး Port Proxy လို့ ရိုက်ပြီး အလွယ်တကူ စိတ်ကြိုက် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကိုတော့ Port Proxies သုံးတဲ့နည်းလို့ အလွယ်ခေါ်လို့ ရပါတယ်။ Port proxies တွေ သုံးမယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါ နေရာအသီးသီးမှာ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Browser အလိုက် IP နဲ့ Port တွေ ပြင်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော် Port Proxies သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ များသောအားဖြင့် ဒီနေရာက Proxy တွေ ယူသုံးလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲ့မှာ ဆိုရင် ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ နိုင်ငံအလိုက် ရွေးလို့ ရတယ်။ Anonymity level ရွေးလို့ရတယ်။ Protocol type ရွေးလို့ရတယ်။ စသဖြင့် စိတ်ကြိုက် ရွေးယူလို့ ရပါတယ်။
နည်းလမ်း ( ၃ ) >> သီးသန့်ပြင်ဆင်ထားသော Software များအား အသုံးပြု၍ ကျော်ယူသောနည်း - ဒီအကြောင်းကိုတော့ Online လုံခြုံရေး နှင့် VPN Services များအကြောင်း ဆိုပြီး ကျွန်တော်ရေးထားပေးတာ ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ တကယ်တော့ Privacy နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အထူးအရေးကြီးတဲ့ Advanced users တွေ အတွက်ပါ။ Advanced users တွေအတွက်လို့ ဆိုထားတ့ဲ အတိုင်း ဒီနည်းကို သုံးမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံအကုန်အကျ မခံနိုင်ပဲ သုံးဖို့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ Free ပေးထားတာတွေ ရှိပေမယ့် ဒီနည်းက အရမ်းကန့်သတ်ချက်များတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာမှာ ဆက်ဖတ်ပေးပါ။
ဒီဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်း ( ၃ ) ခုမှာ တော်တော်များများကတော့ ပထမနဲ့ တတိယနည်းလမ်းကို သုံးကြတယ်။ Free သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ပထမ နည်းလမ်းက သုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ဒုတိယနည်းလမ်းက Free ရပေမယ့် လုပ်ရကိုင်ရ လက်ပေါက်ကပ်ပါတယ်။ တတိယနည်းကတော့ ပိုက်ဆံပေးမသုံးနိုင်ရင် သုံးဖို့ သိပ်အဆင်မပြေလှပါဘူး။
ဒီအကြောင်းကိုတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာရော အောက်မှာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာပါ ပါဝင်ပြီးသားမို့လို့ သီးသန့်ထပ်ပြီး မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ လေ့လာကြည့်ကြပါ။ Proxy နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီ့ထက်ပို နားလည်ချင်ရင် အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွေကို ကိုလည်း သီးသန့် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုထားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Network Address Translation နှင့် Proxy Server တို့ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း
မြန်မာပြည်က ပရုပ်ဆီ ပရုပ်ဆီ အော်နေသူများအတွက်
ByPass Proxy အကြောင်း
အင်တာနက် စီစစ်ခြင်းအား ကျော်လွှားခြင်း
Web Proxy ဆိုသည်မှာ
Web Proxy ၏ ဆိုးကျိုးများ
HTTP Proxy ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
Switch Proxy တစ်ခုထောင်ခြင်း
Switch Proxy အားအသုံးပြုခြင်း
(Tor-the onion router)
Tor Browser Bundle အားအသုံးပြုခြင်း
Tor IM Browser Bundle ကို အသုံးပြုခြင်း
Tor ကို Bridges များဖြင့်အသုံးပြုခြင်း
VPN နှင့် Tunneling အကြောင်း
Socks Proxies ကို အသုံးပြုခြင်း
WEB PROXIES ထောင်ခြင်း
Psiphon အား Install ပြုလုပ်ခြင်း
Tor Bridge တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း
Proxy တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၏ အန္တရာယ်များ
ကျွန်တော် ခု ဖော်ပြခဲ့သလောက် အပြည့်အစုံကြီး မဟုတ်ပေမယ့် Proxy နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသုံးပြုပုံတွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို မိသားစုဝင်များ နားလည်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
1:12 AM LeaveaComment